नाङ्गो सहर र नाङ्गा मान्छेहरू | मझेरी डट कम
kbs — Fri, 12/24/2010 - 19:34
डा. साहेबले भन्नु र ममा देखिएको प्रहेलिका किसिमको रोगको लक्षण कसरी मिल्न गयो श्रीमान् । मलाई शारीरिक यौनशोषण वा बलात्कार कसैले गरेको छैन । त्यस्तो कारणबाट म कसरी मानसिक रोगी भएँ ? अर्काको कारणबाट म रोगी भएको छु । त्यसको क्षतिपूर्ति कस्ले दिन्छ ?
न्यायमूर्ति आसनबाट उठ्न खोज्नु भयो । अझै केही बोल्नु भएन । मैले उहाँसामु थप याचना पोखेँ । म उठेर अझै ठूलो स्वरमा बोलेँ -'श्रीमान् यो तपाईंको निजी घर हो । यहाँ आएर यहाँको निजी समयलाई वर्वाद गर्नुपर्दा म आफैँले अनुचित काम गरेजस्तो लागिरहेछ तर श्रीमान्, म सहन सक्दिनँ । यो सहर ननाङ्गियोस्, सभ्य र शालीन बनोस् भनेर मैले अदालतको ढोका घच्घच्याएँ । सार्वजनिक मामिलामा मुद्दा हाल्नु मेरो गल्ती थियो त ! यसको अश्लील र नाङ्गो रूप पछिका पिँढीहरूले देख्नु नपरोस् । सहर सुधि्रयोस् भन्ने मेरो कामना गलत भयो र ! श्रीमान् ! यहाँको एकल फैसलाबाट यो झनै स्वतन्त्र भएको छ । के स्वतन्त्रता नाङ्गो हुनलाई दिनु हो र ! देख्नु होला यो सहर अब नग्न ताण्डवनृत्य नाच्छ । तपाईंहरूले पुनर्विचार गर्नु भएन भने भावी सन्तान झनै पीडित हुने छन् ।
न्यायमूर्ति अझै बाथरुमबाट बाहिरिनु भएन । नुहाउन पसेको हो कि'कति समय बसिराखूँ, हैन बस्छु । मेरो मानसिक घाउको पीप न्यायमूर्तिको बैठककक्षभरि नपोखी जान्न ।
पत्रिकावालाले एउटा राष्ट्रिय दैनिक झ्यालबाटै छिराएर गयो । सडकबाट फालेको त्यो समाचार पत्रिका मेरो अगाडि आएर पछारियो । पत्रिकाको कभरपृष्ठ आफैँ खुल्यो विस्तारै र त्यो नाङ्गियो । मैले त्यसमा नाङ्गो व्यानर न्युज देखेँ । पत्रिका टिपेर पुरै नङ्ग्याएँ । फ्रन्ट पेजको हेड न्युजमा मेरा आँखा परे -'एउटी विक्षिप्त तरुनीले सहरलाई नाङ्गो बनाई ।'
व्यानरन्युजको हेडलाइन बढी युनिक र हास्यास्पद लाग्यो । मलाई त्यै समाचार पहिला पढ्न कुतकुती जाग्यो । लेखिएको थियो-'काठमाडौँ संवाददाता, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर एउटी महिलाले सहर नाङ्गो भएको जिकिर गर्दै हालेको मुद्दामाथि वहस पैरवी हुँदा निज महिलाले मुद्दा हारेकी छिन् । जिल्ला अदालतमा हालेको सो अनौठो मुद्दाको सुनुवाई पछि.......न्यायाधीशको एकल इजलासले सो विषयलाई अनावश्यक र विक्षिप्त प्रकृतिको भनी त्यसलाई खारेज गरेको छ । मुद्दा हाल्ने महिला कस्तो पृष्ठभूमिकी हुन् थाहा हुन सकेको छैन ।
न्यायमूर्तिले कम्प्युटर अन गर्नुभयो । आफ्नो इमेल चेक गर्नुभयो । म नदेखेझैँ देखिरहेकी थिएँ । एउटा ई-पत्र स्त्रिmनमा देखियो-'न्यायमूर्ति श्रीमान्, मैले त्यो जग्गा प्राप्त गरेँ भने यहाँलाई शुभलाभ नै हुनेछ ।'
अहो ! अचम्म कानुन बर्खिलाप गर्न न्यायाधीशलाई इमेल ! अब जनता न्याय खोज्न कहाँ जान्छन् ? न्यायमूर्तिले मेरो आँखा छलेर अरू इमेलचेक गर्न लाग्नुभयो । म उहाँको नजिकै गएँ र फेरि बर्सिएँ -' श्रीमान् अब म न्याय खोज्न कहाँ जाउँ ? मलाई यतिमात्र भनिदिनुस् म पुनरावेदन गरुँ कि नगरुँ ? तपाईं छातीमा हात राखेर भन्नुस् सहर नाङ्गो छ कि
छैन ? तपाईं आफैँ अन्तरदृष्टिले हेर्नुस् । ऊ, सहर नाङ्गै हिँडिरहेको छ ।''
बल्लबल्ल श्रीमान् मुस्कुराउनु भयो - ''सुन्दरी ! नाङ्गो नै सुन्दर हुन्छ, हैन र । सानो नाङ्गो बच्चालाई हेर्नुस् त त्यो कति सुन्दर हुन्छ । तपाईंकै तर्कअनुसार कुरा गर्दा पनि नाङ्गो हुनु सुन्दर हुनु हो । अझ तपाईंजस्ती सुन्दरी नाङ्गी हुँदा त त्यहाँभन्दा अलौकिक र सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् अरू के नै हुन सक्तछ र ! नरिसाउनु होला, मैले तपाईंको तर्कमा मेरो तर्क मिलाउन खोजेको मात्र हुँ । तर्क मिल्नु मन मिल्नु हो । मन मिल्नु भनेको दुबै एक हुनु होइन र ! अ... तपाईंको मुद्दाको जुन विषय छ, त्यहाँ विपक्षका तर्कहरू बढी बलिया देखिए । तपाईंका वकिलहरूले सहर नाङ्गो भएको प्रमाण जुटाउन सकेनन् । हामीले त ऐन/कानुनले के बोल्छ, त्यै गर्ने हो ।''
मैले अलि रातो भएर भने-''न्यायमूर्ति सहर नाङ्गो छैन भन्ने प्रमाण के छ नि ! विपक्षी वकिलहरूले जे भने त्यो सदर कसरी भयो ! नाङ्गो हुन लुगा फुकाल्नु पर्दैन । विचार र व्यवहारले पनि त्यो नाङ्गो हुन्छ । साहित्यमा मात्रै बादसाह पनि नाङ्गै हिँडेको सुहाउँछ ।''
न्यायमूर्ति चुपरहनु भयो । पत्रिका टिप्नु भयो र मलाई मेरै विषयको न्युज देखाउनु भयो र भन्नुभयो-''सुन्दरी मेरो चाहना तपाईंलाई मुद्दा हराउने थिइनँ तर प्रमाणहरू तपाईंको पक्षमा बोलेनन् । वकिलहरूले जिब्रो चपाएर कुरा गरे । त्यसैले तपाईंले मुद्दा हार्नुभयो तर सुन्दरी तपाईंले मुद्दा हारे पनि तपाईंको पुनरावेदन जाने अधिकारलाई म रोक्न सक्दिन । तपाईं जान सक्नुहुन्छ तर त्यहाँ पनि प्रमाणहरू जुट्न सक्दैनन् र तपाईंले हार्नुहुन्छ ।'
मैले जिकीर गरेँ -' मैले त्यहाँ पनि हार्छु नै भनेर कसरी भन्न सक्नु हुन्छ ? फेरि पनि मैले हार्नुभनेको मैले आत्महत्या गर्नु हो । असहृय पीडाले पीडित मुद्दा गर्छ, पटकपटक हारिरहन्छ भने ऊ किन बाँचिरहन्छ ?
मर्छ नि पासो लगाएर । देखीदेखी नाङ्गो सहरलाई चिरिच्याट्ट लुगा लगाएको देख्नु न्यायदिने पक्षको दृष्टिभ्रम हो श्रीमान् । भ्रमको संसारमा मलाई बाँच्नु छैन । नाङ्गो सहरले मेरो मानसिकतामा बलात्कार गरेको छ । त्यही बलात्कारको पीडाले म डिप्रेस्ड भएकी छु श्रीमान् ।'
उहाँ बोल्नुभयो- बलात्कारको परिभाषा कानुनले अर्कै गर्छ सुन्दरी ! तपाईं 'बलात्कृत' हुनुभयो त्यसको परिभाषा बताउनुस् त ।
न्यायमूर्ति कुटिल मुस्कुराहटमा देखिनुभयो । वनावटी सद्भाव देखाउनु भयो र भन्नु भयो -'सुन्दरी तपाईं डिप्रेस्ड होइन, म डिप्रेस्ड भएँ । जानुस् पुनरावेदन गर्नुस् ।
तिमी तारे भीर म त लहरा